आकस्मिक बाहेक आज देशभरका अस्पतालमा सबै सेवा ठप्प, काउन्सिलमा लाइसेन्स फिर्ता गर्ने कार्यक्रम पनि ! | जनदिशा
आकस्मिक बाहेक आज देशभरका अस्पतालमा सबै सेवा ठप्प, काउन्सिलमा लाइसेन्स फिर्ता गर्ने कार्यक्रम पनि !
काठमाडौं, १७ भदौ । नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनका कारण आज देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प भएको छ । चिकित्सकहरुले आजै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्स फिर्ता गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छन् ।
Previous Previous post: कंगनासँग बक्स अफिसमा टक्कर लिन चाहदैनन् ऋतिक, यस्तो छ कारण !
Next Next post: विमान दुर्घटनाका कारण अवरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आयो